:: My Little World ::: September 2009
Posted by Nay Nay Naing at 9/29/2009 04:07:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/28/2009 04:49:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/20/2009 01:35:00 AM6comments
မနေ့ ညက ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အပြင်သွားတိုင်း မြင်မြင်သမျှ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြန်ကြည့်ရင်း ရန်ကုန်ကို သတိရတယ်။ မနက်နိုးတော့ ဒီသီချင်းလေးနားထောင် ဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ ပိုပြီး သတိရသွားတယ်...
ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း၊ ပြောင်းတယ် ပြောပြော...
လူတိုင်းက မင်းကိုချစ်တော့ ချစ်ကြမယ်..
ပြန်အဆင်ပြေမှာပါ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ ကွယ်
မင်းမပြစ်မဟုတ်ခဲ့တာ ငါတို့ နားလည်...
ရန်ကုန်မြို့ကြီးရယ်.. မငိုလိုက်နဲ့ ..
Posted by Nay Nay Naing at 9/18/2009 11:25:00 AM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/15/2009 03:43:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/10/2009 02:47:00 PM4comments
ပဲပြုတ် နဲ့နံပြား
ဒီမနက် စားလိုက်ရတဲ့ နံနက်စာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခု စားချင်နေတဲ့ ၊
Posted by Nay Nay Naing at 9/10/2009 08:21:00 AM9comments
President Obama warned American teenagers on Tuesday of the dangers of putting too much personal information on Internet social networking sites..
"Well, let me give you some very practical tips. First of all, I want everybody here to be careful about what you post on Facebook, because in the YouTube age, whatever you do, it will be pulled up again later somewhere in your life" Obama said.
"And when you're young, you make mistakes and you do some stupid stuff....
Posted by Nay Nay Naing at 9/09/2009 02:49:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/09/2009 11:40:00 AM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/08/2009 04:25:00 PM5comments
ဒီနေ့နေလို့မကောင်းဘူး။ လည်ချောင်းတွေယားပြီး ချောင်းပြန်ဆိုးနေတယ်။ ဒီ မနက်စာနဲ့နေ့ လည်စာ စားလို့မ၀င်ဘူး။ အခု ဗိုက်ဆာနေတယ်။ စားချင်စိတ်လည်း သိပ်မရှိဘူး။ အတော်ခံ ရခက်တာပဲ။ ဒီနေ့ အလုပ် အရမ်း မရှုပ်လို့တော်သေးတယ်။
မနေ့ က အခန်းရှင်း လိုက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ရလာဒ် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ပစ္စည်းတွေ နေရာရွှေ့ တာ တင်မကဘူး ရှိသမျှ ပစ္စည်း ဖုန်ခါတယ်။ ကျန်တဲ့ နေရာတွေက ဖုန်သိပ် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခန်းထောင့်မှာ ရှိတဲ့ ပန်ကာကို ဖုန်သွား ခါလိုက်မိတယ်။ အဲယားကွန်းပဲ သုံးတော့ အဲဒီ ပန်ကာကို လုံးဝ မဖွင့်ဖြစ်ဘူး။ ထောင့်မှာ ရှိနေတော့ လူလည်း မရောက်ဘူး။ မနေ့ ကမှ ကြည့်တော့ ဖုန်တွေတက်နေတာတွေ့ တာနဲ့သန့် ရှင်းရေး လုပ်လိုက်တယ်။ ပန်ကာလေးတော့ သန့် သွားပါရဲ့ အဲဒီက ဖုန်မှုန့် တွေတော့ လည်ချောင်းထဲ ဘယ်လောက်ဝင်သွားလည်း မသိဘူး။
မနေ့ က ညနေပိုင်း စာလည်းပြန် ဖတ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ နိစ္စဓူဝ လုပ်နေကျအရာတွေ ထက် ထူးတာတွေ ပို လုပ်မိလို့ကျန်းမာရေး ချူချာသွားတာလားလဲ မသိပါဘူး။
ဒီမှာ ခုရက်ပိုင်း နည်းနည်းအေးပြီး မိုးလည်း ရွာနေတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်စောစောပိုင်းက မိုးရွာတာမှ သည်းသည်းမဲမဲပဲ။ လျှပ်စီးတွေလက် မိုးတွေချုန်း။ အဲလို မိုးရွာတယ်ဆို နိုးလာတာ များတယ်။ အသံနည်းနည်း ဆူတာနဲ့နိုးတာပါပဲ။ နိုးပြီးရင်လည်း ချက်ချင်း ပြန်အိပ်လို့ မရ။ အအိပ်ဆက်တာ မကောင်းဘူး။ ဒါတောင် အရင်ကထက်စာရင် တိုးတက်လာတာ ဆိုရမယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အသံနည်းနည်း ဆူတာလောက်ဆို အိပ်လို့ ရလာပြီ။
အစားအသောက်ပိုင်းက ဟိုး အရင်ကထက်စာရင် အများကြီးတိုးတက်တယ်။ အစာမှန်မှန် စားတတ်လာပြီ။ အိပ်တာတော့ လိုသေးတယ်။ အလုပ် ပင်ပန်းရင် အိပ်မရတာမျိုးက ရှိသေးတယ်။ အိမ်မှာဆို တခြားမောင်နှမတွေ နဲ့ကျွန်မ ပြောင်းပြန်။ သူတို့ တွေက ဘယ်လို အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်တတ်တယ်။ ထိုင်ရက်လည်း အိပ်တတ်တယ်။ ချက်ချင်းလည်း အိပ်ပျော်တယ်။ အိပ်တော့မယ်ဆို အိပ်ယာထဲဝင်သွား၊ ခနနေ သွားကြည့် တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေပြီ။ စိတ်ရှုပ်၊ အလုပ်ရှုပ်နေလည်း အိပ်ရေးတော့ လုံးဝ မပျက်ဘူး။ အိပ်ပျော်တာပဲ။ အိပ်ပျော်နေတုန်း သွားနိုး၊ ပြီးရင်ူဆက်အိပ်လို့ရတာပဲ။ ကျွန်မဆို ဒါမျိုး လုံးဝ မရဘူး။ ဘယ်လို၊ ဘယ်အခြေအနေမှာ ဖြစ်ဖြစ် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို အားကျတယ်။ အဲလို ဖြစ်ချင်တယ်။
အခြားအချိန်ဆို အိပ်မပျော်တာ သိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် အလုပ်ပင်ပန်းရင် လူအတော် ခံရတယ်။ အခုတလော အလုပ်အတော် ပင်ပန်းတယ်။ အစားအသောက် စားဝင်နေတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ နည်းနည်း ပြန်ပိန်သွားပေမယ့် ဟိုးအရင်ကလောက်တော့ မပိန်သွားဘူး။ လူကြီးတွေ စိတ်ချမ်းသာနိုင်သေးတာပေါ့လေ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/07/2009 04:43:00 PM5comments
Speaker ၀ယ်ဖြစ်တာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ နေ့ က။ Snow leopard ၀ယ်ရင်း တခါတည်းဝယ်ဖြစ်သွားတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ခုအားလပ်ရက်မှ သေချာ နားထောင်ဖြစ်တော့တယ်။ အားလုံး နေသားတကျ ထားဖို့ရှုပ်နေတဲ့ အခန်းကိုလည်း ရှင်းရသေးတယ်လေ။ ခုတော့ အားလုံး နေရာတကျဖြစ်သွားပြီ။
အခန်းရှင်းပြီးတာနဲ့ရေမိုးချိုး အေးအေးဆေးဆေး သီချင်းနားထောင်ရင်း စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ အရမ်း အရမ်းကို ကျေနပ် သဘောကျနေပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/06/2009 08:23:00 PM7comments